အီရန်အမျိုးသား နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်. အီရန်အမျိုးသား နက္ခတ်တာရ
ⓘ အီရန်အမျိုးသား နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်. အီရန်အမျိုးသား နက္ခတ်တာရာကြည့်မျှော်စင် တည်ဆောက်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ကြယ်တာရာနက္ခတ်များကို လေ့လာရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ မီတာမျှရှည ..
ⓘ အီရန်အမျိုးသား နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် အီရန်တွင် နက္ခတ္တဗေဒနှင့်ပက်သက်ပြီးသုတေသနပြုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သင်ကြားပို့ချမှုပြုလုပ်နိုင်လျှက်ရှိပြီး ကြုံတွေ့လာသည့်အခက်အခဲများကိုလည်း ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိနေမှုသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်၂၀အတွင်းပညာရေးမြင့်မားလာမှုများကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ပါ။အီရန်နိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်တိုင်းတွင် နက္ခတ်ပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းရှိပေသည်။၎င်းတက္ကသိုလ်များ၌ ထားရှိပေးထားသောကိရယာများမှာ တယ်လီစကုတ်မှန်ပြောင်းအငယ်စားများဖြစ်ပြီး ထိုအရာများကို များသောအားဖြင့် B.A နှင့်M.Aမာစ်တာတက်နေသောကျောင်းသားများအသုံးပြုရန်အတွက်ထားပေးထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
အလတ်စား တယ်လီစကုတ်စက္ခုဗေဒမှန်ပြောင်းသည် ကြယ်တာရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွယ်တကူ သုတေသနပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်ဟုယူဆရသည်။ အီရန်၏ပထဝီတည်နေရာ, 32N 53E, အလွန်ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုနှင့်မြင့်မားသောတောင်တို့ရှိသည့်အတွက် အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းများတပ်ဆင်ရန်အသင့်လျှော်ဆုံးဖြစ်ပေသည်။ထိုမှတစ်ဆင့်တွေ့ရှိချက်များကိုအချိန်ကာလနှင့်အညီစမ်းစစ်ရေးအတွက်ဖြစ်ပေသည်။
လက်ရှိအချိန်, INO စောင့်ကြည့်ရေ:အဆောက်အဦး၏အဓိကလုပ်ငန်းသည်၃.၄m အရွယ်ရှိ တယ်လီစကုပ်မှန်ပြောင်းတစ်ခုဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းကို INO၃၄၀ အဖြစ်လူသိများ သည်။
ဆိုဒ်ရွေးချယ်ချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၀၀၀ခုနှစ် ထိုသို့ရွေးချယ်ရန်အတည်မပြုမီကတည်းမှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆိုဒ်များ၂၀၀၀-၂၀၀၇အတွင်းရွေးချယ်ပြီးနောက် INO သည် လက်ဝယ်၌ရှိသောဆိုဒ်နှစ်ခုအကြားတိုင်းထွာမှုများဖြင့် ထိုနှစ်ခုကို နှုင်းယှဉ်နိုင်ခဲ့သည်မှာ Dinava ~၃၀၀၀m နှင့် Gargash ~၃၆၁၀mတို့ဖြစ်ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် INO သည် Gargash တောင်ကို ၎င်းစီမံကိန်း၏ဆိုဒ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ထိုဆိုဒ်ကိုလက်လှမ်းမီလာနိုင်ခဲ့သည်။
Ritchey-Chrétienf/ 11 အမည်ရှိတယ်လီစကုတ်သည် ခန့်မှန်း၍မရနိုင်သော မြင်ကွင်းကို တည့်တည့်မတ်မတ်ပြသပေးသည်။၎င်းအပြင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် မြင်ကွင်းဖိုးကစ်အကွက်၃ခုကိုလည်းပြသပေးသည်။ထိုဖိုးကစ်များတစ်ခုစီ၏ မြင်ကွင်းသည် ၈ arcmin ရှိသည်။ မူရင်းမှန်M1သည်အလွန်မှပင်မြန်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးf/ 1.5 အချင်း၃.၄မီတာရှိသည်မှာ INO340 သည် တယ်လီစကုတ်အမျိုးအစားများအတွင်း အရှားပါးဆုံးဖြစ်သည်။ M1၏မှန်ဘီလူးသည် တစ်ဘက်ချိုင့်၍တစ်ဘက်ခုံးနေသောမှန်ဘီလူးဖြစ်ပြီး ၁၈ စင်တီမီတာထူသည်။၎င်းကို Zerudor အမျိုးအစားဖြင့်တီထွင်ပြုလုပ်ထားပြီး အလယ်ဗဟိုသည် ၇၀၀ မီလီမီတာရှိသည်။ အဆိုပါ M1 သည် actuators ပေါင်း ၆၀နှင့်အတူ အထောက်အကူပြုထားပြီး ၎င်းတစ်ခုချင်းစီသည် မှန်ဘီလူးကို မှန်ကန် ပုံသဏ္ဌာန် ထွက်ပေါ်လာစေရန်ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ ၆၀၀ မီလီမီတာအထူရှိသည့် ဒုတိယမှန်ဘီလူးသည် ပထမမှန်ဘီလူးမှလာသော အလင်းရောင်ကို ပြန်ဟက်စေသည်။ ထိုအရာကိုလည်း hexapod ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားလေသည်။ ၎င်းကို Zerudor အမျိုးအစားဖြင့်တီထွင်ပြုလုပ်ထားပြီး ခြဲ့ကျင်းနိုင်သော ဂျီဩမေတြီ ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပေသည်။
တယ်လီစကုတ်ထားရှိသောတောင်သည် Azimuth Alt-az ထက်မြောက်များစွာမြင့်မားသည်။ ထိုသို့မြင့်မားမှုသည် အလွန်မှပင်သိပ်သည်းပြီးသေးငယ်သည်အရာများကိုပင် တယ်လီစကုတ်ဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်ပေသည်။အမြင့်၌ တယ်လီစကုတ်ရွေ့လျှားမှုပြုရန် မောင်းနှင်အသုံးပြုသော မော်တာများကို လျှို့ဝှက်စာလုံးများဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
TCS သည် တယ်လီစကုတ် စနစ်အောက်ရှိ နံပါတ်စဉ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်တာဝန်ရှိသူဖြစ်ပေသည်။ဥပမာ စူပါပ်MCS စစ်သမ်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှာ လိုရာဘက်သို့ တယ်လီစကုတ်အားလှည့်ခြင်းနှင့် မှန်ဘီလူးများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊လှုပ်ရှားမှု စနစ်ACS ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။MCSသည် လုပ်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်သွယ်ပေးသူထံမှ လုပ်ဆောင်ရမည့်အမိန့်များကိုရယူလေသည်။
TINO စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာတွင် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းစခန်းသည် ဂါရ်ဂါးရှ်တောင်ထိပ်ဗဟို၏တောင်ပိုင်းမီတာ၅၀၀ ခန့်အကွာတွင်ရှိသည်။ ထို့ပြင်ထိုစခန်း၌ ၃.၄ မီတာ အရွယ်အစား တယ်လီစကုတ်ကို တပ်ဆင်ထားလေသည်။ ဆိုက်ကို စောင့်ကြည်ထိန်းချုပ်သည့်စခန်းတွင် အော်တိုမီတစ် DIMM စနစ်ကို တောင်ပေါ်မြေပြင်နှင့် ၆ မီတာအမြင့်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ထိုအော်တိုစနစ်ကို တီဟီရန်မှ အဝေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားလေသည်။ထိုအတိုင်းပင် မိုးလေ၀သ စခန်းကိုလည်း တောင်ပေါ်မြေပြင်နှင့် ၉ မီတာအမြင့်တွင် ရှိပြီး ၎င်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုလည်း အိမ်တွင်းထိန်းချုပ်မှုဒီဇိုင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဆိုက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအချက်အလက်များသည် INO ဝဘ်ဆိုက်တွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
5. INO နှင့် သိပ္ပံ
နက္ခတ္တဗေဒနှင့်စပ်ဆိုင်သော ပညာရေးအကြောင်းအရာများကို ၃.၄ မီတာရှိ အလယ်လတ်တန်း INO တယ်လီစကုတ်ကိုအသုံးပြုကာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ထိုနည်းတူစွာ လှိုင်းဝေးကွာသောနေရာများအတွက် နာနိုမီတာ၃၂၅နှင့် ၂၅၀၀ အကြားအတွင်း ဒီဇိုင်းဆွဲထားလေသည်။ INO340 သည် အခြားတယ်လီစကုတ်ကြီးများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍အသုံးပြုနိုင်သော အလွန်မှပင်ကောင်းမွန်သည့် ကရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအတိုင်းပင် အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းများအသုံးပြု၍ အကောင်းဆုံးအနေအထားဖြင့်ပြုလုပ်ထားလေသည်။ မျိုးတူလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မျိုးကွဲလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။သို့သော်လှိုင်းအနေအထားသည် အလွန်ခြားနားမှုမရှိစေရပါ။.
ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ကြယ်တာရာအသေးအကြီး ဂြိုဟ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာပုံအပြင် ကြီးထွား လာပုံများကိုလေ့လာတွေ့ရှိနေမှုသည် အလတ်တန်းစား တယ်လီစကုတ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေ သည်။ အလွန်ကြီးမားသော တယ်လီစကုတ်များပေါနေချိန်၌ ဤသို့လေ့လာတွေ့ရှိမှုများသည် တိုးတက်သောစက် ပစ္စည်းကရိယာများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်။သို့သော် အလွန်ကြီးမားသောတယ်လီစကုတ်များဖြင့် သုတေသနပြုခြင်းများတွင် အခက်အခဲအသစ်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထိုအခက်အခဲများသည်အလွန်များ ပြားဆန်းသစ်သည့်အတွက်၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းရန်အသေးစိတ်လေ့လာရန်လိုအပ်ပေသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက် ၂.၄ m အတန်းစား အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကိုတောင်းဆိုထားဆဲဖြစ်သည်။ထိုတယ်လီစကုတ်သည် အီရန်နက္ခတ္တဗေဒစခန်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆီးပေးနိုင်သလို မြောက်များစွာသော ကြယ်တာရာ နက္ခတ်များနှင့်ပတ်သက်သော အဓိကကျသည့် အချို့သော မေးခွန်းများဖြစ်သည့် ဂြိုဟ်နက္ခတ်ကြီးထွားလာပုံများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံများ ၎င်းကြယ်တာယာ ဂြိုဟ်များအတွင်း သတ္ထုထုတ်လုပ်ပေးမှုများ အဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပုံများနှင့် ဂြိုဟ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ အသိ၌ ပေါ်လာပုံစသည် မေးခွန်းများ၏အဖြေကိုပေးနိုင်လေသည်။
အီရန်နိုင်ငံတွင် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် အပို-Galactic နက္ခတ္တဗေဒသည် ရည်ရွယ်ချက်အသစ်များဖြစ်ပေသည်။သို့သော်လွန်ခဲ့သောကာလများ၌ ကရိယာများမပြည့်စုံမှုနှင့်ကြုံကြိုက်ခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးတွင် INO340 သည်ထိုလမ်းကြောင်းကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်အောင်ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်များရှိလာခဲ့သည်။နက္ခတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်သလိုအဖြေပေးနိုင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုကိုအသုံးပြု၍ INO340 သည် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်သည်။ထိုအကြောင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အကြံပေးမှုအမျိုးမျိုးကိုလည်း စိစစ်လျှက်ရှိသည်။
Wikipedia: အီရန်အမျိုးသား နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်